Alshabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu laayay kirishtaan kenyaati ah. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Alshabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu laayay kirishtaan kenyaati ah.
Last updated May 4, 2018 244 1
Xarakada mujaahidiinta alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar shalay gelinkii dambe (khamiis 03 05 2018) ka dhacay deegaan hoos taga degmada mandheera ee dhulka soomaalida Kenya gumeysato halkaaasoo lagu laayay dad kirishtaan kenyaati ah.
Ilaa 5 ka tirsan kirishtaanka ayaa dhegta dhiigga loo daray waxaana la dhaawacay ugu yaraan laba kale kadib weerar ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kirkishtaanka ku soo xad gudbay dhulka muslimiinta sida idaacadda alfurqaan uu u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta alshabaab.
Ciidamada Kenya ayaa saaka qaatay meydadka saaxiibadood iyadoo wejiyadooda murugo laga dareemayo kana tiiraanyeysan ugaarsiga kirishtaanka lagu bartilmaameedsanayo.
Meydadka ayaa waxa la geeyaydeegaanka Kenya ula baxday ceel waaq Kenya oo degmada mandheera hoos taga.
Warbaahinta kenya geesteeda waxay sheegeysaa in dadka la dilay ahaayeen shaqaale ka tirsan qolyaha dhanka dhismaha ka shaqeeya waxaana dilkaani ku soo aadayaa iyadoo cabsi xoog leh haysato dadka kirihstaanka ah ee ka howl gala dhulka muslimiinta ee Kenya haysato gaar ahaan kan soomaalida.
Macalimiinta kirishtaanka ee wax ka dhigayay iskuulada ku yaalla dhulka Kenya waqooyi bari ula baxday ayaa horay shaqa joojin ugu dhawaaqay sababo la xariira baqdin ay ka qabaan in mujaahidiintu soo weeraraan dabadeedna dilaan.
Horay deegano hoos taga mandheera iyo kuwa kale oo ka tirsan degmooyinka kale ee kenya soomaaliya ka haysato waxaa uga dhacay weeraro lagu xasuuqay kenyaati badan oo kirishtan ah taasuna waxay keentay in qaar badan oo kirishtaanku cagaha wax ka dayaan oo ay gudaha neyroobi isku warsadaan.
abaalkooda weeyaan, Allaah ajarkooda ha badiyo mujaahidiinta.